Hadal-jeedinta Marwada koowaad ee dalka oo Mareykanka ka wadda olole loogu gurmanayo dadka ay Fataahaddu saameysay – Radio Muqdisho
Hadal-jeedinta Marwada koowaad ee dalka oo Mareykanka ka wadda olole loogu gurmanayo dadka ay Fataahaddu saameysay
Assalaamu calaykum Waraxmatullaahi Wabarakaatuhu
Farxad bay ii tahay inaan idinku soo booqdo magaalada Columbus si aan idin kala qayb qaato munaasabaddan aan ugu gurmanayno walaalaheenna Soomaaliyeed ee ay saameeyeen fatahaadaha ka dhacay Degmooyinka Beledweyne, Bardaale, Baardheere iyo meelaha kale oo ay dhibaatooyinku ka dhaceen.
Runtii markii uu dhibka dhacay waxaan la soo xiriiray dhallinyarada gobolka oo ay hormuudka u yihiin gabdhaha Soomaaliyeed ee hortayda ka muuqda iyo ganacsatada magaaladan si aanan uga harin gurmadka shacabka Soomaaliyeed ay gees ka gees dunida ka wadaan.
Maanta oo kale waxaa nalooga baahanyahay midnimo, istaageerid, samafal iyo in kuweena wax haysta ay gacan ka gaystaan gurmadkaas.
Dadka Soomaaliyeed waligoodba waxay caan ku ahaayeen is taakuleynta, maantana kumaba sii jirto oo 70kun oo qoys wax ka badan ayaa magaalooyinkaas ka barakacay.
Alle S.W.T wuxuu xadiisul qudsi ku yiri “dhulka isugu naxariista si aan samada idin kaga naxariisto.” Musiibadan waa mid lagu tijaabinayo dadkeenna maanta aan haysan wax ay cunaan iyo meel ay seexdaan. Walaalayaal, Eebe hanagu asturo xilkaas na sugaya iyo waajibaadka naga saaran inaan u gurmanno hooyooyinka iyo carruurta dibad yaalka ah.
Aniga ka Marwo ahaan waxaan halkan idiinku imi oo aan safar dheer usoo galay inaan hormuud idiinku noqdo hawshan, waxaan sidoo kale tagayaa gobollo kale si aan u dardargeliyo hawshan aan caawa halkan ka bilownay.
Hooyooyinka Soomaaliyeed ee halkan jooga waxaa idin saaran waajib gooni ah sababta oo ah dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira cidda ugu badan ee ay ku dhacayso waa hooyo Soomaaliyeed, waa carruur Soomaaliyeed, waa dadka nugul. Aan gacmaha isqabanno oo aan sidii nalagu yaqaannay hawshan dadaal badan galinno.
Alle waxaan uga baryayaa in shacabka Soomaaliyeed ee ay daadadku barakiciyeen inuu culeyska ka dulqaado, waxaana idinka codsanayaa in dhaqaalo aruurintan loo xil saaro guddi si hufan u maamula oo gaarsiiya dadka ugu baahida badan.
Wasiirka Shaqada XFS oo kormeeray dib u dhiska ka socda Xarunta Wasaaradda+Sawirro
Wafdi uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaare Kheyre oo gaaray dalka Faransiiska.
Wafdi uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaare Kheyre oo gaaray dalka Faransiiska.